စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီး အဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူအောင်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ဖိတ်ခေါ်? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၁ဝ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ရာဇမဏိ စူဠာကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီး အဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူ အောင်မြင်ပြီးစီးခြင်း အထိမ်းအမှတ် ဖိတ်ခေါ်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကို ဂေါပကအဖွဲ့ နှင့်စစ်ကိုင်းဓာတ်ပုံအသင်းတို့က ဦးစီးကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုတော်စေတီတော်ကြီးတွင် မတ် ၁၉ရက်မှ ၂၁ရက်အထိ အဖြူရောင်ဆေးသင်္ကန်းကပ် အနေကဇာတင် အခမ်းအနား၊သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ (၈၂)နှစ်ပြည့် သံဃာအပါး ၁ဝဝဝဆွမ်းကြီးလောင်းလှူပွဲနှင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစည်တော် ကြီးပင့်ဆောင်တင်လှူအောင်ပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါရက်များတွင် ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားများ၌ ရိုက်ကူးထား သော ဓာတ်ပုံများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
”ဒါက ကောင်းမှုတော်စေတီ တော်ကြီးအတွက် သမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ရမယ့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အများ ပြည်သူဖူးတွေ့ချင်တဲ့ အဖြူရောင် ဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူပြီးစီးခြင်း အောင်ပွဲပါ။ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ကောင်းတွေ လိုချင်ပါတယ်။ ဖိတ် ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင် တွေ လက်စွမ်းပြရိုက်ကူးကြမှာမို့ ပုံကောင်းတွေရမှာ သေချာပါတယ်” ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။ ပြိုင်ပွဲများမှ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၅ဝဝဝ ဖြင့် စစ်ကိုင်းဓာတ်ပုံအသင်း ဥက္ကဋ္ဌထံ ဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ရာ ဝင်ခွင့်ကတ်များကို မတ် ၁ဝရက်မှ ၁၈ ရက်အတွင်း ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဖိတ်ခေါ်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ပထမဆု ကျပ်ငါးသိန်း၊ ဒုတိယ ကျပ်သုံးသိန်း၊ တတိယ ကျပ်နှစ်သိန်း၊ နှစ်သိမ့်ဆု ငါးဆုအတွက် တစ်ဆု လျှင် ကျပ်တစ်သိန်းစီနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ အကြိုက်ဓာတ်ပုံဆု ငါးဆုအား ကျပ်သုံးသောင်းစီ ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
‘ဝ’ အထူးဒေသအတွင်း ရေအဆိပ်သင့်သည့် ပြည်သူ ၂ဝ ခန့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တွင် အရေးပေါ် ကုသမှုခံယူခဲ့ရ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအနီး ဝက်မှေးရွာဟောင်းမှနေအိမ်အချို့ ရွာသစ်သို့ပြောင်းေ??
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် မီးတောင်မှ ချော်ရည်များ မှုတ်ထုတ်နေသည့်အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောများ